समानुपातिकमा बन्द सुचिका नामहरुलाई तलमाथि गर्न पाईँदैन् : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव
‘२ दिनभित्र सबै परिणाम सार्वजनिक हुन्छ’ काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दलहरुले समानुपातिक तर्फको बन्द सुचिमा राखेका उम्मेद्धवारका नामहरुलाई नै
बिजय गच्छदार विजयी, भगवती ३२१ मतले पराजित
सुनसरी, २७ मंसिर । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बिजयकुमार गच्छदार झिनो मतान्तरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । शुरुदेखि नै अग्रता कायम गरेकी एमालेकी भगवती चौधरीको
४ वटा प्रदेशमा एमाले, २ वटामा माओवादी र एउटामा मधेशी गठबन्धनले सरकार बनाउने, यि हुन् मुख्यमन्त्रीका दाबेदार
२७ मंसिर, काठमाण्डौ । ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी गठबन्धन अर्थात राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको सरकार बन्ने
प्रदेश मुकाम सिफारिस
काठमाडौं २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको
सुनसरी ३ मा विजयकुमार गच्छदारको अग्रता अझै बढ्यो, ५१९ मतले अगाडि
काठमाडौं २७ मंसिर । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये बाँकी रहेको एक मात्र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। जितको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको उक्त क्षेत्रमा
काठमाडौं २७ मंसिर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६७ जना नयाँ अनुहार विजयी भएका छन् । मंगलबार रातिसम्म १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अब सुनसरी ३ मा मात्र मत गन्न
निर्वाचन जितेका रेशम चौधरीलाई सरकारले किन खोज्यो ?
काठमाडौं, २६ मंसिर । टिकापुर हत्याकाण्डका ‘फरार अभियुक्त’ रेशम चौधरी करिब २१ हजार मतान्तरले चुनाव जित्दै सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका छन् । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधीसभा सदस्यमा निवाचित चौधरीले बाम गठबन्धनका
निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले खेलेको भूमिका गर्व गर्न लायक छ: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव
काठमाडौं, मंसिर २६ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले खेलेको भूमिका गर्व गर्न लायक रहेको जनाएको छ। मंगलबार निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको निर्वाचनसम्बन्धी समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनमार्फत
काठमाडौँ, २६ मंसिर : काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित हुनुभएका नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आज लैनचौरमा आयोजित
उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउने प्रचण्डको चाहनामा ओली बाधक
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैछ । चुनावी परिणाम हेर्दा जनताले वाम गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई नै मत दिएका छन् ।
‘देउवाजीले चाहानुभयो भने संसदीय दलको नेता आँफै बन्नुहुन्छ’ काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाँणले तत्काल पार्टी नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स
महन्थसँग पार्टी एकता नभए एमालेसँग मिल्ने उपेन्द्रको तयारी
काठमाडौं, २६ मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पार्टी एकताको लागि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले ठाकुरसँग अब दुई पार्टी मिलेर जानुको